Blockchain News 16.07.2018 - Blockchain News
Chikunguru 16, 2018 arun
New York okudenha crypto BitLicense kuna BitPay
Cryptocurrency mubhadharo processor BitPay razova rechi8 chakasimba kugamuchira "BitLicense" kubva New York Department of Financial Services, izvo rinotarisira zvinhu arguably the-zvinhu zvikuru ehurumende-ichasimudzirwa yemibvunzo yacho US cryptocurrency indasitiri.
Kufarirwa kwacho kwaisanganisira "misoro ongororo" yacho yakasimba wacho Anti-mari laundering, Anti-kubiridzira, capitalization, mutengi kudzivirirwa, uye cybersecurity mitemo. Standalone mubhadharo processor BitPay zvino anogona kubata cryptocurrency kubhadhara New York vatengesi uye vagari, uye rezinesi uyewo authorizes kambani kuti ape cryptocurrency-mari debit makadhi rehurumende.
G20 Gwaro zvabudiswa yemibvunzo “vakasvinurira” crypto zvichiongororwa
The Financial Kugadzikana Board (FSB), sangano pfungwa pokuongorora uye nokuita dzave kusvika G20 iri rose mari gadziriro, chaauya urongwa kuti vachiongorora cryptocurrency zvinhu kuti “vanofanira kuona uye kuderedza ngozi kuti mutengi uye investor kudzivirira, musika kuvimbika, uye zvinogona kuita zvemari isimbe.”
The FSB wacho zvichiongororwa kuitwa ichanyanya pamusoro crypto zvinhu’ mutengo volatility, crypto kuti vakwanise kushandiswa vachibhadhara uye masangano kuona, uyewo kumusika wacho volatility kana zvichienzaniswa goridhe, mari uye equities.
Hong Kong kuti blockchain wezvokutengeserana mari papuratifomu kuenda kurarama maererano September
The Hong Kong Monetary Authority (HKMA), ari zvionera Chinese nharaunda yacho of facto Central Bank, iri vagadzirira nokuparura munhu mhenyu blockchain wezvokutengeserana mari chikuva mukati memwedzi miviri.
“The Trade Finance Platform ari blockchain chirongwa anosarudza 7 Banks Hong Kong. The chirongwa yave akwanise ne HKMA uye vanonyanya nokuda pakuparurwa kubudikidza September 2018.”
The HKMA wacho blockchain papuratifomu ane 21 mabhanga kupindira sezvo pokuita nodes, kusanganisira HSBC uye Standard Chartered.
Chirongwa ndiko kuedza kuunza pachena nemashoko nokugoverana mhiri mari kumasangano.
Thailand ari kuronga “Bond Coin” nokuti nokukurumidza kuchengetedzeka ugari
A sangano kuzvidzora pamutemo muna Thailand ari kuronga kuumba tsika chiratidzo kunangidzirwa kuti rikurumidze yemakambani chisungo kugarwa munyika.
The Thailand Bond Market Association (TBMA) akati izvozvo agamuchira mitema chiedza kubva Thailand raMwari kuchengetedzeka uye Exchange Commission kukudziridza blockchain private kuti zvichava chete nyore kuti mapato ari chisungo pamusika, akadai vakanyorwa issuers, vanoita nemasangano panodonedzerwa.
The blockchain anotsanangura papuratifomu ndechokuti Pachikamu uye kugoverana chisungo ruzivo, akadai mubereko prices ari vakaparadzira nomutowo, uye zvinoita chisungo deposits.
The TBMA akaratidza zvichaita pakupedzisira kuva chii rinoti “chisungo mari” pamusoro blockchain pachikuva kuti tokenize yesangano kuti speedier kupishinura uye ugari.
Chaitat Prachuabdee, Executive mutevedzeri purezidhendi TBMA, vati kwezvivako zvitsva anotarisirwa kuvandudza pachena kuti yemakambani chisungo ruzivo uye Tingangonyanya kuatapudza kutengeserana nguva kubva pari 7-10 mazuva mazuva 1-3 chete.
American Express mafaira bvumidzwa nokuda blockchain-yakavakirwa uchapupu-of-mubhadharo michina
Kadhi Zirume American Express anotsvaka bvumidzwa kuti blockchain-yakavakirwa uchapupu-of-mubhadharo hurongwa.
The bvumidzwa chikumbiro rinotaura kuti American Express Travel Related Services achange uchishandisa blockchain-dzinofambiswa hurongwa kugamuchira "muripo nokusimbisa kusanganisira kutengeserana chitsama uye mutengesi identifier."
AmEx inoti kuti kwaizova kunyanya pachena blockchain hurongwa izvo zvichabatsira mu ukaramba "mutengapwe Data, chibvumirano date, uchapupu-of-mubhadharo Data, kuongorora date, uye / kana mamwe mashoko sezvinodiwa. "The kambani anoti veruzhinji blockchain ezvinhu kupa wokuwedzera rukoko uchapupu pamusoro kwema zvose kuitika pasi AmEx kuti Network.
Schnorr vagadzirira kuva Bitcoin raMwari zvikuru kuchinja kubva SegWit
The Schnorr Bitcoin ndiwedzere akatora chinokosha danho kune Implementation svondo rapera, apo simba yokuvaka Pieter Wuille kufukidzwa ubate yaitaura kwayo hwokugadzira wakagadzirwa.
Pfungwa anovandudza scaling uye toga munyika chinokosha cryptocurrency.
zvinobudirira, ichi nokugadza Schnorr sezvichakurukurwa kuchinja kuna Bitcoin, zvichireva ichava kupfuura bumbiro shanduko kubva zvakaparadzaniswa Witness (vakatevera).
At waishandiswa pamwero, achiwedzera rutsigiro Schnorr digitaalinen siginicha zano aizopa Bitcoin vanoshandisa nzira itsva kuti vaunze zvinodiwa cryptographic kiyi inoshandiswa yokuchengetera mutume Bitcoin.
$6T mari maneja BlackRock anonzi rinoongorora Bitcoin nokuda inivhesitimendi
pakukura twa Maneja munyika, BlackRock, iri anonzi kuongorora Bitcoin kuona kana kambani inofanira vanopedzisira Bitcoin neramangwana.
Blackrock Rinotarisira dzakazadza madhora yesangano nokuda Wall Street nemasangano, nomumwe vanoita uye nheyo. Mumwe paro mabhizimisi ndiko kushumira nyanzvi - vanachiremba, magweta, Vadzidzisi uye Main Street - kuburikidza yaikura pfuma yavo.
BlackRock ave anonzi pave kushanda boka iri kuferefeta sei Blackrock "anogona kushandisa kukura nokukurumidza cryptocurrency musika."
Kraken Daily Market Mushumo 15.07.2018
$64.1M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Stash Invest Account 3 Week Up...
se. komenda. Subscribe. Tw...
Previous Post:Blockchain News 15.07.2018
Next Post:Blockchain News 17.07.2018
Tayna Felipe anoti:
Chikunguru 30, 2018 pa 5:50 AM
Kubvumbi 25, 2019
Kubvumbi 24, 2019
altcoin AltCoin Buzz altcoin daily altcoins bitcoin bitcoin analysis Bitcoin crash bitcoin crash over bitcoin nhau bitcoin news today Bitcoin price bitcoin price growth bitcoin price news bitcoin technical analysis bitcoin today misa cheni BTC btc news btc today cardano crypto cryptocurrency cryptocurrency market cryptocurrency news cryptocurrency trading crypto news decentralized eos ethereum ethereum analysis ethereum news ethereum price how to make money bhizimisi investing bitcoin investing crypto is bitcoin done crashing litecoin neo nhau ripple pamusoro altcoins tron when to buy bitcoin xrp